Hanolotra safidy hafa tsara kokoa ho an'ireo mpangatsioka amin'ny rivotra ve i Mist Fan?
Betsaka ny fomba azo atao mba hampangatsiaka ny manodidina antsika sy hampihenana ny hafanana mafana. Ny tontolo mafana dia mampihena ny haavon'ny angovo amin'ny vatantsika ary tsy mamela antsika hametraka fifantohana tanteraka amin'ny asa rehetra. Mahatsiaro tena ho tsy mahazo aina izahay rehefa avo ny mari-pana satria ny famotsorana ny hatsembohana amin'ny vatantsika wi ...
Ny fitsipiky ny fiasan'ny rivotra
Ny fitsipiky ny fiasan'ny tsindrona varingarina Ny fitsipiky ny fiasan'ny tsimok'aretina centrifugal dia mitovy amin'ny an'ny ventilator centrifugal, fa ny fizotran'ny rivotra dia matetika atao amin'ny alàlan'ny impellers miasa (na ambaratonga） maro eo ambanin'ny asan'ny c ...
Ny haitao fanalefahana afovoan-tany, anisan'izany ny akorandriaka ivelany, voafaritra ao amin'ny akorandriaka ivelany ny fipetrahana anatiny dia tsy misy zavona, ary takelaka zavona napetraka ivelan'ny sombin-kazo, voalaza ao amin'ny bara mpanohana eo ambanin'ny fifandraisana misy casing ivelany, ary apetraka eo ambany ...
Ny fitsipiky ny hamandoana afovoany dia ny lovia rotary afovoany mihodina amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta ambanin'ny fihetsiky ny motera, ary ny rano dia hariana mafy amin'ny lozismanitra, ary ny rano fantsom-batana dia mihodina ho 5-10 microns an'ny singa ultrafine ary noroahina avy eo. Taorian'ny blo ...
Rehefa nanambara ny Phoenix Suns tamin'ny taona 2019 fa handany $ 230 tapitrisa hanamboarana ny kianja izy ireo, mpankafy sosialy 1.500 feno olona dia tsy nanantena hisokatra intsony. Na izany aza, rehefa nisoratra anarana tamin'ny alàlan'ny fidirana nanitsy ny trano heva ny mpanatrika tamin'ny volana 11 volana taorian'ny nandaozany ny toerana, ...
Rehefa nanambara ny Phoenix Suns tamin'ny taona 2019 fa handany $ 230 tapitrisa hanamboarana ny kianja izy ireo, mpankafy sosialy 1.500 feno olona dia tsy nanantena hisokatra intsony. Na izany aza, rehefa nisoratra anarana tamin'ny alàlan'ny fidirana nanitsy ny trano heva ny mpanatrika tamin'ny volana 11 volana ...
Xiaomi dia mandefa ny DOCO Ultrason dry Misting Fan
Xiaomi dia nanangana mpakafy tànana azo entina izay mandingana koa ho toy ny hamandoana. Ny DOCO Ultrasonic Dry Misting Fan dia toy ny mpankafy tanana mahazatra nefa miaraka amina endrika misongona. Ny mpankafy dia mampiasa maotera borosy DC miaraka amin'ny haavon'ny tabataba ambany, fanjifana herinaratra ambany ary tsy mafana na dia amin'ny ...
Ahoana no famokarana zavona mpankafy afovoany sentrifugal
Ny mpankafy zavona afovoany dia misy tavoahangy fitehirizana, fonosana, motera ary fantsom-panafody; Ny tavoahangy fitehirizana rano dia omena lohan-tsifotra, ny lohan-tsifotra dia ampifandraisina amin'ny atin'ny tavoahangin-drano amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody, ny lohan-tsifotra dia omena lohan-tsifotra sy tanana ...
Andao hampahafantatra ny heateran'ny helo liquefied karazana elo
Amin'ny ririnina mangatsiaka dia heverin'ny tsirairay ny hanaovany ny akany ho mafana sy miaina. Fitaovana fanafanana majika maromaro nipoitra tamin'ny fotoana nety, saingy misy ihany koa ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana, ny fomba fampiasana am-pilaminana dia olana lehibe. Andao hampahafantatra ny heateran'ny helo liquefied karazana elo. Endri-javatra entin'ny Gas ...
Fanamainana Patio Gas dia mampiadana kokoa ny fiainana
Ahoana ny fomba hisorohana ny adin-hafanana?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-20
Fanafanana herinaratra dia mitondra fanampiana amin'ny fanafanana any ivelany
Vidin'ny gazy. Teny roa izay mety hiteraka tahotra na dia amin'ny kitapo salama indrindra aza, ary amin'ny fomba izay mety tsy noeritreretinay hatrizay. Ohatra iray amin'izany ny fanafanana ny trano onenana. Raha samy hafa karazana heaters etona etona ivelany misy ny Infrared Heater sy ny Propane Heater ho an'ny faritra ivelany ...